Ny andriamby IPad, toy ny andriamby rehetra, dia mampidi-doza ho an'ireo marary manana defibrillator napetraka. | Vaovao IPhone
Ny andriamby IPad, toy ny andriamby rehetra, dia atahorana ho an'ireo marary manana defibrillator napetraka.
Sary orizinaly avy amin'i ADAM Inc.
Heveriko fa tsy misy olona mahalala tsara ny cardioverter-defibrillator napetraka, na satria manana izy ireo, na satria fantany ny fomba fiasan'izy ireo, dia ho gaga tamin'ity lohateny ity. Saingy ity no karazam-baovao izay aolan'ny radio, fahitalavitra, gazety an-tsoratra sy ny karazan-bilaogy rehetra, koa mieritreritra aho fa mety hahaliana ny miresaka ity olana ity ao amin'ny Actualidad iPad. Ho anao izay tsy mahalala ny zavatra resahintsika, ny Implantable Cardioverter Defibrillator (ICD) dia fitaovana kely iray, mitovy amin'ny pacemaker, izay napetraka ao ambanin'ny hoditry ny marary, ary ampifandraisin'ny electrodes amin'ny fo. Ny tanjony dia ny mamantatra ny fikorontanan'ny gadona amin'ny fo mety hahafaty, ary rehefa mahita azy ireo, manaterà dona amin'ny herinaratra ao am-po hamerina azy amin'ny gadona mahazatra.
Ny vaovao dia zazavavy iray 14 taona, amin'ny tetikasa siansa, dia nianatra ny vokatry ny fametrahana iPad mivantana eo amin'ny tratran'ny marary ICD. Araka ny efa nampoizina dia tapaka ny DAI noho ireo andriamby izay ananan'ny iPad amin'ny fametahana sy ny fiasan'ny smartcover. Ary lazaiko araka ny nampoizina, satria ICD dia voaomana tsara ka rehefa entina manakaiky ilay fitaovana ny andriamby dia tsy mihetsika intsony ho toy ny fepetra fiarovana. Ilay fandinihana ihany koa dia nanambara fa amin'ny fampiasana mahazatra ny iPad dia tsy misy olana, raha tsy apetraka amin'ny tratra.
ny tolo-kevitra izay aseho hatrany amin'ireo marary mampiasa io karazana fitaovana io dia ampidiro hatrany ilay fampitandremana tsy misy andriamby tokony ho akaiky ny DAI, mba hialana amin'ity vokatra tsy ilaina sy mampidi-doza ity, satria na dia matetika aza ny fitaovana dia mamerina mihetsika ara-dalàna rehefa misaraka ny andriamby dia mety tsy izany no izy ary tsy hihetsika intsony izy io.
Raha ny tena izy, raha mitady ny torolàlana ho an'ny iPad amin'ny tranokala Apple ofisialy isika dia hita taratra tsara fa ny iPad dia manana andriamby izay mety hanelingelina ireo mpampita haody, defibrillator na fitaovana fitsaboana hafa. Noho izany, Apple dia manome antsika ny tolo-kevitry ny aza mitondra ny fitaovana hanakaiky ny 15 sm amin'ny pacemaker noho ny saha elektromagnetika. Ary tsy ny iPad ihany, fa ny Smart Cover sy Smart Case, izay misy andriamby ihany koa, no miseho amin'ireo singa tsy maintsy raisin'ireo olona manana ireo fitaovana napetraka ao aminy ireo.
Fanazavana fanampiny - Fampiasana vaovao an'ny Smart Cover amin'ny patanty
Loharano - iMore
Sary - SHC
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Ny andriamby IPad, toy ny andriamby rehetra, dia atahorana ho an'ireo marary manana defibrillator napetraka.
"Pebble" famerenana famantaranandro marani-tsaina: mendrika ny fiandrasana
Biraon'ny patanty amerikana dia mampiseho ny patanty mpampitohy ny tselatra